October 2, 2020 - Online Hartha
သားဦးစနေ မီးလိုမွှေဆိုတာ ယုံတမ်းစကားလား ? တကယ်လား..?
October 2, 2020 by Online Hartha
သားဦးစနေမွေးရင်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်စနေသားသမီးဟာဒုတိယဘုန်းကံအကြီးဆုံးစနေသားဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော်တဲ့မိဘတွေ စောစောသေကုန်ကြလေရဲ့စနေနေ့မရှိခဲ့ရင် ရတနာ၃ပါးလည်းလောကမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးစနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီးရတနာ ၃ ပါးစုံတဲ့ရတနာအခါတော်နေ့ပဲစနေနေ့ဟာတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မစက်စတည်တဲ့နေစနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ်တဲ့နေ့ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စပေါ်သည်တရားရတနာနဲ့သံဃာရတနာကတော့စနေနေ့မှာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄၇ရတာနာ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့စပေါ်ရပါတယ် ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာကိုကောက်လည်း ၄၇၇ပဲနော်စနေနေ့မရှိပဲတရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလည်းမရှိနိုင် တရားနဲ့သံဃာမှ မရှိရင် ဘုရားပွင့်ခဲ့ကြောင်းလည်းမသိနိုင် ရတနာ၃ပါး နဲ့သာသနာကြီး ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာဒါကိုသားဦးစနေမီးလိုမွှေဆိုပြီး ပေါက်ကရပြောသူက ရှိခဲ့တယ် ရဟန်းတော်တွေအားလုံးဟာဘုရားရဲ့ ဘာတွေလဲ သားတော်တွေ မဟုတ်ဘူးလား သားတွေထဲက ဦးဆုံးသားကို ဘာလို့ခေါ် သားဦး လို့ခေါ်တယ်နော်ပထမဦးဆုံး စနေနေ့မှာ ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော့ အရှင်ကောဏ္ဍည သောတာပန်တည်တယ် ဘုရားထံမှာ ရဟန်းပြု ခွင့်တောင်းတယ် သံဃာရတနာ အစဟာ ဗေဒင်ဆရာကပဲ ကောဏ္ဍည က ဗေဒင်ဆရာဘဝကလာတာလေ … Read more
ဘုနျးကွီးကြောငျးမှ သင်ျကနျးတှပေေါမြားနလေို့ သင်ျကနျးပွနျဝယျပွီး လှူတာ ကုသိုလျရပါသလား ငရဲကွီး ပါသလား?
မင်္ဂလာပါ ဦးဇင်း။ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ သူများလှူ ပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပီး ပြန်လှူရင် ကုသိုလ်မရဖူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ ဥပမာ ပြောရ ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သင်္ကန်းတွေပေါများနေလို့ တပည့်တော်မက အသစ်တခု မဝယ်တော့ပဲ အဲသင်္ကန်းကိုပဲ ဘုန်းကြီးစီ ဝထ္ထုငွေနဲ့ပြန်ဝယ်ပီး ပြန်ပီး လှူရင် ကုသိုလ်မရဖူးလို့ပြောတာကြားဖူးလို့ပါ။ အဲတာ ဟုတ်ပါသလား။ အဲ့လိုလုပ်ရင် ငရဲကြီးတတ်ပါတယ် ဒကာမ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရဟန်းတော်က ပိုက်ဆံ မသုံးရဘူး၊ ပစ္စည်း မရောင်းရဘူး၊ ဖလှယ်မှုကိုလည်း မပြုရပါဘူး။ ဒကာမကို ရဟန်းတော်က သင်္ကန်းတွေ ပိုက်ဆံနဲ့ လဲလိုက်ရင် ရောင်းရင် ရဟန်းတော်ကလည်း ငရဲကျမယ် ဒကာမကလည်း ဝိနည်း နဲ့ သာသနာတော်ကို ဖျက်ဆီးနေတဲ့အတွက် ငရဲကြီးတတ်ပါတယ်။ ဝိနည်းကို မလိုက်နာတတ်တဲ့ ရဟန်းတော်တွေကို ဝိနည်းမှာ … Read more
“ပရိတ်တွေ ပဌာန်းတွေ ရွတ်နေလို့ ကိုရိုနာရောဂါကြီးက ပျောက်သွားမှာလား…?”
” အရှင်ဘုရားတို့..ညစဉ် ပဌာန်းရွတ်၊ရတနသုတ်တွေရွတ်နေရုံနဲ့ Covid.19ရောဂါ ပျောက်မယ်ထင်လို့လား။? တပည့်တော်အမြင်ကတော့ လုံးဝမ‌သက်ဆိုင်ဘူးလို့မြင်တယ်။ အဲဒီယုံကြည်မှုတွေက ဒုက္ခရောက်မဲ့ယုံကြည်မှုတွေလို့မြင်တယ် ဘုရား။တပည့်တော် ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ပါ တရားနာရလို့ ဖားလေး နတ်ဖြစ်တာ၊လင်းနို့သားတွေ ရဟန္တာဖြစ်တာမပြောနဲ့ဘုရား..တပည့်တော်မယုံဘူး..တဲ့။( ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်ရဲ့စာပါ။ ) ” အော်..ကျောင်းဆရာကိုး။ ဒကာရေ့..ဘေးနားမှာ လျှပ်စစ်မီးလွှတ်ထားတဲ့ဝါယာစလေးများရှိရင်..လက်နဲ့ကိုင်လိုက်စမ်းပါ။ ဓာတ်လိုက်ပြီးသေသွားလိမ့်မယ်‌နော်။ လျှပ်စစ်ဟာ သက်မဲ့ဆိုပေမဲ့..ဓာတ်ကူးပြီးအစွမ်းပြ လူသတ်နိုင်တယ် ဒကာရဲ့။မယုံဘူးဆိုပြီး သွားမစမ်းနဲ့နော်ဒကာ။ (ဒကာ..စာတတ်အောင်သင်ဖူးခဲ့မယ်ဆိုရင် chemistry မှာ ဓာတ်ပြုခြင်း၊ဓာတ်ကူးခြင်းသဘောတွေ နားလည်မှာပါ။ အလွတ်ကျက်အောင်လာတဲ့သူဆိုရင်တော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးဒကာရဲ့။) နောက်တစ်ချက်က..ဒကာဟာ ကျောင်းဆရာဖြစ်နေပေမဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့စွမ်းအားကိုနားမလည်တဲ့ကျောင်းဆရာဖြစ်နေတာကတပည့်တွေအတွက် ကံဆိုးမှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒကာက ရုန့်ရင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကို ပစ်ပေါက်နေမယ်(ဆဲနေမယ်) ဆိုရင်..အဲဒီစကားလုံးတွေကအဆဲခံရသူထံ ကူးသွားပြီး အစွမ်းပြလိမ့်မယ်ဒကာ။လောဘ၊ဒေါသတွေဖြစ်လာပြီးမငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ချက်ခြင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ မတွေးဝံ့စရာ ရလာဒ်တွေလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ( စကားလုံးတွေကအစွမ်းပြလို့ လူသတ်၊ထောင်ကျ၊ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ဒကာကြားဖူးမှာပါ။) နည်းပေး၊လမ်းညွှန်၊ဆိုဆုံးမစကားတွေ၊ကောင်းတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေရဲ့သမိုင်းတွေ၊ မြင့်မြတ်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူတို့ရဲ့ အကြောင်းတွေကို ကြားရတဲ့အခါမှာ … Read more